भारतको उत्तर प्रदेशमा आगामी वर्ष चुनाव हुँदैछ । चुनावबाट प्रदेश सरकार फेरिएला कि दोहोरिएला ? सर्वत्र चासो छ ।
यसैबीच सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले ‘जय श्रीराम’ नाराकै बलमा चुनावमा जाने संकेत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सरकारका उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यले ट्वीट गर्दै धार्मिक नाराकै बलमा चुनाव लड्ने संकेत गरेका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अयोध्या काशीमा भव्य मन्दिर निर्माण जारी छ, मधुराको तयारी छ । जय श्रीराम, जय शिवशम्भु, जय श्री राधेकृष्ण ।’
मौर्यको ट्वीटलाई राजनीतिक संकेतका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले चर्चा गरिरहेका छन् । वर्षाैंदेखि चर्चामा रहेको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण शुरू भइसकेको र अब मथुरामा भगवान् श्रीकृष्णको प्रतिमा स्थापित हुने मुद्दालाई बीजेपीले प्रचारमा ल्याउन खोजेको छ ।
यसअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मौर्यले भगवान् श्रीरामको भव्य मन्दिर निर्माण कार्य शुरू भएपछि भक्तजनमा खुशी छाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
राममन्दिर निर्माण कार्यले बीजेपीलाई राजनीतिक लाभ मिल्छ वा मिल्दैन ? यो भने चुनावी नतिजाले नै बताउने छ ।